Nepali Christian Bible Study Resources - पाँच न्यायहरू
» बाइबलको अर्थ प्रकाशन » ध्यानमा राख्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू » ५-पाँच न्यायहरू
डा. पेन्टेकोस्टको यो भनाइ सही हो: "यही हानिकारक बानीले गर्दा इसाई जगतको बोलीचालीमा न्यायको परिभाषा संसारको अन्तमा एकैपटक हुने ठूलो घटना हो भन्ने बुझिन्छ जुन बेला सबै मानिसहरू, पवित्र जनहरू, पापीहरू, यहूदी तथा अन्यजातिहरू, मरेका र जीवितहरू, "ठूलो सेतो सिंहासन" का सामु उभिनेछन् र त्यहाँ न्याय गरिनेछन्। यो त बाइबलको सही शिक्षाभन्दा ज्यादै परको कुरा हो।
यस खण्डको "न्याय" भन्ने अनूदित शब्दलाई मत्ती १०:१५, हिब्रू ९:२७, २ पत्रुस २:४ मा पनि प्रयोग गरिएको छ। २ कोरिन्थी ५:१० मा प्रयोग गरिएको "न्याय" भन्ने शब्दचाहिँ बेग्लै शब्द हो जुनचाहिँ विश्वासी जनहरूको कामहरूको न्यायसित सम्बन्धित छ।
किनकि हामीले आफैलाई जाँच्यौं भने हाम्रो न्याय गरिनेछैन। तर संसारसँगै हामी पनि दोषी ठहरिन नपरोस् भनेर हाम्रो न्याय गरिँदाखेरि प्रभुबाट हामी ताडना पाउँछौं (१ कोरिन्थी ११:३१,३२)।
स्थान: "हावामा"; विश्वासी जनका लागि
परिणाम: "इनाम" वा "नोक्सानी" – "तर ऊ आफैचाहिँ बाँच्नेछ"
यो एक गम्भीर कुरा हो कि ख्रीष्टले हाम्रा पापहरू क्रूसमाथि आफ्नै शरीरमा बोक्नुभएर परमेश्वरले ती पापहरूलाई "कहिल्यै सम्झना गर्नेछैनँ" (हिब्रू १०:१७) भनी हामीसित करार बाँध्नुभए तापनि, हामीले गरेको हरेक कामलाई भने न्यायमा ल्याइनैपर्छ। विश्वासी जनको जीवन र उसका कामहरू प्रभुद्वारा जाँचिनैपर्छ।
यसकारण चाहे हामी शरीरमा रहौं चाहे नरहौं, उहाँका निम्ति ग्रहणयोग्य बनिने प्रयत्‍न गर्दछौं। किनकि शरीरमा गरिएका कामहरूका निम्ति, चाहे असल होस् चाहे खराब, हरेकले जे गरेको छ, त्यसअनुसारको फल पाउनालाई हामी सबै ख्रीष्टको न्यायआसनका सामु देखा पर्नुपर्छ (२ कोरिन्थी ५:९,१०)।
तर तिमी किन आफ्नो भाइको न्याय गर्दछौ? वा किन आफ्नो भाइलाई तुच्छ ठान्दछौ? किनकि हामी सबै ख्रीष्टको न्यायआसनका सामु उभिनेछौं (रोमी १४:१०)।
माथिका दुवै खण्डहरू केवल विश्वासीहरूको बारेमा हुन् भन्ने कुरा सन्दर्भले नै देखाउँछ। पहिलो खण्डमा विश्वासी जन शरीरमा रहिरहेको छ भने ऊ प्रभुदेखि टाढा रहेको हुन्छ, ऊ शरीरबाट अलग रहेको हुन्छ भने ऊ प्रभुसितै रहेको हुन्छ भनेर दुई मध्ये एउटा अवस्थामा विश्वासी जन रहेको हुन्छ भनेर पावल प्रेरित बताउँछन्—विश्वास नगरेकाहरूको बयान गर्ने शब्द होइनन् यी। २ कोरिन्थी ५:९,१० अनुसार, "यसकारण...हामी... उहाँका निम्ति ग्रहणयोग्य बनिने प्रयत्‍न गर्दछौं", "किनकि हामी सबै प्रकट गराइनुपर्छ"।
रोमी १४:१० मा "हामी" र "भाइ" भन्ने शब्दहरूबाट विषयवस्तु फेरि विश्वासीहरूमा नै सीमित भएको सङ्केत मिल्छ। पवित्र आत्माले मुक्ति पाएका र नपाएकाहरूलाई मिसाउने काम कहिल्यै गर्नुहुन्न। तथापि रगतद्वारा धोइएको पवित्र जन न्यायमा खडा गराइनेछ भन्ने कुरा अविश्वसनीय नठानियोस् भन्ने हेतुले उहाँले यशैयाबाट उद्धरण गर्नुहुन्छ, यो प्रमाणित गर्न कि "हरेक घुँडा टेक्नेछ", इत्यादि, अनि यसरी थप्नुहुन्छ, "यसैकारण हामीमध्ये हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो-आफ्नो लेखा दिनेछ।"
आधार: ख्रीष्टले "मेरा भाइहरू" भनी जनाउनुभएकाहरू प्रतिको व्यवहार (मत्ती २५:४०,४५; योएल ३:३,६,७)। यी "भाइहरू" चाहिँ "महासंकष्ट" को समयका यहूदीहरू हुन् जोहरूले आफ्ना मसीह येशूलाई विश्वास गर्नेछन्। उक्त महासंकष्टकाल मण्डली उठाएर लगिएपछि शुरू हुनेछ अनि हाम्रा प्रभुको महिमापूर्ण आगमनमा अन्त्य हुनेछ (मत्ती २४:२१,२२; प्रकाश ७:१४; २ थेस्सलोनिकी २:३-९)। यी "भाइहरू" वर्तमान प्रबन्धका विश्वासीहरू हुन सक्दैनन् किनकि विश्वासी जनहरूको सेवा गर्नु येशू स्वयंलाई सेवा गर्नु हो भन्ने ज्ञान समेत नभएका इसाईहरूको कुनै उल्लेखनीय समूह भेट्टाइन असम्भव नै हुन्छ।
जीवित रहेका जातिहरूको यस न्याय र प्रकाश २० को "ठूलो सेतो सिंहासन" को न्यायलाई कतिले एउटै भनी ठान्ने गरेकोले यी दुई घटनाहरूलाई दाँजेर हेर्न लाभदायक हुन्छ।
"मरेकाहरू" को न्याय गरिनेछ
तीन वर्ग: भेडा, बाख्रा, "भाइहरू"
एउटै वर्ग: "मरेकाहरू"
स्थान: "ठूलो सेतो सिंहासन" का सामु (प्रकाश २०:११)
कसै-कसैलाई प्रेरित १७:३१ र रोमी २:१६ जस्ता पदहरूमा पाइने "दिन" भन्ने शब्दको कारण खुलदुली लाग्न सक्छ। बाइबलमा कुनै लामो समयावधिलाई पनि "दिन" भनेर जनाइएको पाइन्छ, जस्तै २ पत्रुस ३:८, २ कोरिन्थी ६:२ र यूहन्ना ८:५६ मा हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरी यूहन्ना ५:२५ को "घडी" को अवधि झण्डै २००० वर्ष भइसक्यो।
[द्रष्टब्य: पवित्र शास्त्रले स्वर्गदूतहरूको न्यायको उल्लेख पनि गरेको छ (१ कोरिन्थी ६:३; यहूदा ६; २ पत्रुस २:४)। लूका २२:३० मा उल्लेखित "न्याय" चाहिँ इन्साफ गर्ने कार्य नभएर सम्भवत: प्रशासनिक कार्य हो। यशैया १:२६ मा हेर्नुहोस्।]
« दुई बौरिउठाइहरू
व्यवस्था र अनुग्रह »